Nwepụta Polikarpov U-2 (Po-2) v1.0 FSX & P3D - Rikoooo
Polikarpov U-2 (Po-2) ngwụsị usoro v1.0 FSX & P3D
downloads 9 717
Mgbe Ochie nke Soviet ụgbọelu, U-2, e kere dị ka a na-enye ọzụzụ, n'ihi nnọchi nke gharazie ịba uru Na-1 (AVRO-504K oyiri). The ụgbọelu e mere na wuru 35 afọ nwa a nchụàjà, Nikolai Polikarpov na June 1927. The mbụ variant whith a akụkụ anọ wingtips na oké airfoil, bụ ndị kụrụ afọ n'ala.
Nke abụọ version (na ahazi wingtips na ọhụrụ airfoil) e flewn January 7, 1928 site ule pilot M.Gromov, nwetakwa kasị elu fim bụ maka.
Uka mmepụta nke Na-2 malitere na March 1928 site plant¹23 na Leningrad. Mgbe agha, Oghere Usoro mmepụta nke dị mfe ma dị ọnụ Nlụpụta Po-2 kwụsị mgbe 1953, na Repair noo - ruo mgbe 1959.
The nọ n'ọrụ ụgbọ elu ndụ nke Na-2, nke e renamed na 1944, mgbe ọnwụ nke a N.Polikarpov ka Po-2, dịgidere ruo ihe karịrị 40 afọ. The imewe nọgidere na-gbanwetụrụ site Polikarpov si Bureau na site idozi na ubi noo. Ihe karịrị 32,000 aircrafts e wuru (na Russian osisi) - nke a bụ nke abụọ uka ugbo elu na ụwa. Ụgbọelu e utu aha dị ka "mule" site NATO na "Kukuruznik" ( "ọka duster", na-akọ ugbo version) na Russia.
Ozi banyere niile nsụgharị dị iche iche na mgbanwe nke Na-2 (Po-2) dịghị onye evergeneralized n'ozuzu ya. Ọ dịghị onye nwere detuo ha niile ma.
Adọrọ mmasị karịsịa na ya akporo na irè bụ ojiji nke Na-2 dị ka a n'abalị otu bombu n'oge Agha Ụwa nke Abụọ. Ihe karịrị ọkara nke ndị bọmbụ ibu, ata ama esịn site nile Soviet aircrafts na 1941-1945 naputa site "Aircrafts nke osisi na nke ákwà".
Anyị kwesịkwara mkpotu a ma ama "Night amoosu" - nwanyi crews nke 46th Taman-eche ha nche ndi agha, onye lụrụ ọgụ valiantly on ha U-2.
Isi ngwa nke a ụgbọelu nnọọ mbụ pilot ọzụzụ. Tupu 1941 banyere 50,000 ụgbọelu e nyere ọzụzụ on Na-2.
Isi uru nke Na-2 dị ka a na-enye ọzụzụ dị ịrịba ụgbọ elu arụmọrụ - nanị ala nke piloting, ala ọdịda ọsọ na eziokwu ahụ bụ na ugbo elu bụ ike itinye a tailspin.
Ọzọ undoubted uru bụ obere vetikal ọsọ nke ife efe - banyere 2 m / s na-abaghị uru rpm. -Erughị parachute nke oge ahụ.
Mba uche na-jupụta mmanụ ụgbọala tank ihe karịrị 40% n'ihi aerobatics.
Ọ dịghị Starter ma ọ bụ generator na a version, n'ihi ya, malite iji aka:
- Set trotul n'enwekwaghị na ngwakọta na-full ọgaranya
- Mgba ọkụ mmanụ ụgbọala cutoff ka "emeghe"
- Pịa menjuobi primer 3-4 ugboro
- Mgba ọkụ magnetos ka "1 + 2"
- Mgba ọkụ-nwe batrị on
- Mgba ọkụ na-"engine mmalite" echiche
- Pịa a prop agụba
Ma ọ bụ pịa Ctrl + e
Onye edemede: SWingman
Ihe oru Avia 156 FSX & P3D
IRIS P-40 Warhawk - Nlele FSX & P3D
Onye isi oche Spartan 7W FSX & P3D